Cusboonaysii Galaxy S3 mini-ka Android 4.4.3 | Androidsis
Casharka xiga waxaan ku tusi doonaa sida looga faa'iidaysto Samsung Galaxy S3 mini, moodal I8190, rakibidda a Rom Cyanogenmod 11 kaas oo sidoo kale cusbooneysiin doona terminaalkeena nooca ugu dambeeyay uguna dambeeyay ee Android, Android 4.4.3 Kit Kat.
Marka hadda waad ogtahay, haddii aad rabto inaad dhaafto Samsung iyo siyaasadeeda cusbooneysiinta xun, cusboonaysii Samsung Galaxy s3 mini ilaa Android 4.4.3 casharkaan fudud iyo hal guji oo guji.
Midka ugu horreeya oo dhan waa inuu kuu sheego in barnaamijyada asalka ah ee Samsung sida kamaradda asalka ah, aan la heli doonin tan ka dib cusbooneysiin rasmi ah oo ku saabsan Android 4.4.3Sababta tan ayaa ah in Samsung, marka lagu daro in aysan si rasmi ah u cusbooneysiinin terminaalkan xiisaha leh ee awood u leh inuu si fiican ula qabsado noocyada cusub ee Android, marka lagu daro taas, sida haddii taasi aysan ku filnayn, waxay dhigeysaa dhammaan caqabadaha lagama maarmaanka ah si aynaan u awoodin dibadda u samee iyaga inaadan sii deyn wadayaasha codsiyadaada. Tani waa sababta aysan u jirin dekedo ama la qabsasho barnaamijyadooda ku saabsan roms aan rasmi ahayn.
3 Habka biligleynaya Cyanogenmod 11 ee Samsung Galaxy S3 mini
Shuruudaha la buuxinayo ayaa maraya hayaan dhammaan barnaamijyada rakiban, waana iyada oo lagu gudajiro rakibida romka oo noo cusbooneysiin doonta ek Samsung Galxy S3 mini ilaa Android 4.4.3 Kit Kat, waxaan sameyn doonaa dib u dejin warshad waana waayi doonaa dhamaantood.
Si loo raaco casharradan si guul leh, waa inaan haysanaa a Windows PC inaad leedahay Wadayaasha Samsung ayaa rakibay, hadaad leedahay Samsung Kies ku rakibtay kombuyuutarka horay ayaad u samayn lahayd, haddii kale, adiga Waxaad kala soo bixi kartaa boggeeda rasmiga ah, ku rakib, ku xir mobilada oo sug wadayaasha lagama maarmaanka ah in lagu rakibo.
Sidoo kale batteriga waa in laga qaadaa 100 × 100 iyo Dib udhiska USB waa la awood galiyay xulashooyinka soo-saaraha. Haddii aanaan haysan xulashooyinkan karti-u-helka meennada, waxaan ka awoodsiin karnaa xulashada ku saabsan lambarka taleefanka / isku-duwidda adoo gujinaya toddoba jeer oo isku xigta dusha.
Faylasha loo baahan yahay ayaa ku kooban barnaamij la fulin karo oo loogu talagalay Windows, Odin, iyo laba feylood oo isku-duuban oo zip ah, mid aan ka soo rakibeyno Odin lafteeda iyo in lagu daro rakibidda Cyanogenmod 11 Rom ee ugu dambeeyay oo wata Android 4.4.3 Kit Kat, Waxaan sidoo kale rakibi doonaa Soo-kabashada wax laga beddelay kaas oo aan hadhow ka rakibidoono barnaamijyada Google ee asalka ah sida Play Store.
Midda keliya faylka ay tahay inaan nuqul ka samayno ilaa xididka xusuusta Samsung Galaxy S3 uu noqon doono kan barnaamijyada Google in aan markaa ka iftiimin doonno ka soo kabashada TWRP.
Habka biligleynaya Cyanogenmod 11 ee Samsung Galaxy S3 mini
Furi faylka zipka ee cyanogenmod 11 Rom illaa aan ka heleyno feyl .tar.gz ah, waan fureynaa Odin oo waannu socodsiinnaa faylka .exe sida maamulayaasha nidaamkaSi tan loo sameeyo, waxaan ku gujineynaa astaanta badhanka midig ee midig waxaanna dooranaa ikhtiyaarka aan ugu soconno maamule ahaan. (fiiri sawirka kore)
Waxaan ku wajahan nahay Odin, ikhtiyaarka kaliya ee aan taaban doonana waa PDA, waxaan gujineynaa adiga iyo waxaan u gudbineynaa faylka .tar.gz laga bilaabo romka Cyanogenmod 11 si loo xusho. Marka la doorto waa inaan hagaajino ikhtiyaarka ah RE-Partition lama hubiyo. Fiiro gaar ah u yeelo shaashadda hoose maadaama tallaabadani ay aad muhiim u tahay.
Hadda waxaan ku xirnaa Samsung Galaxy S3 mini PC-ga oo waxaan sugeynaa odin si aan u aqoonsano, waxaan ku siin doonaa inta ugu badan sanduuq yar oo erayga ku jiro COM oo lagu daray lambar ka muuqda qaybta bidix ee kore ee barnaamijka. Markaan soo muuqano waxaan gujineynaa badhanka Bilowga oo sug barnaamijku inuu dhammeeyo shaqadiisa, taasoo noqon doonta marka erayga naloogu celiyo bidixda kore DHAGAX
Waxaan ka jareynaa kumbuyuutarka Galaxy S3 mini iyo sida ugu dhakhsaha badan ee Calaamada Cyannogenmod 11 oo aan bilowno inaan nidaamka ku shubno, waxaan ka qaadnaa batteriga si aan mar kale u shidno laakiin qaabka soo kabashada ama Soo kabashada, tan waxaan u heynaa furayaasha mugga oo lagu daray Guriga iyo Awoodda.
Mar labaad soo kabashada, waxaan doorannaa Wipe option y waxaan calaamadeyneynaa dhammaan sanduuqyada marka laga reebo midka ka mid ah xusuusta gudaha iyo / ama sdcardMarka la doorto, waxaan ku dhajineynaa baarka si aan u fulino ficilka.
Waxaan ku laabaneynaa shaashadda weyn ee Soo kabashada TWRP waxaana kaliya oo aan dooran doonaa ikhtiyaarka Ku rakib si loo raadiyo ku dhaji barnaamijyada Google ee asalka ah in aan soo dejino tillaabadii hore oo aan nuqul ka qaadano xusuusta gudaha ee Samsung Galaxy S3 mini, haddii aad ilowdo inaad u wareejiso S3 mini, ka bood talaabadan, dib u bilow oo mari iyaga ka dibna dib ugu noqo soo kabashada oo ku rakib ka xulashada Ku rakib. Marka xulashada la doorto Ku rakib waxaan ku dhajineynaa baarka si aan u fulino ikhtiyaarka, waxaan sugeynaa inay dhameyso oo aan doorano ikhtiyaarka Nidaamka reboot hadda.
Terminal-ka ayaa dib loo bilaabi doonaa waana lahaan doonaa Samsung Galaxy S3 waa la cusbooneysiiyay Android 4.4.3 si buuxda u shaqeynaya iyo aad uga fiican filaayo in la Samsung Samsung asalka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Ka bood Samsung! iyo cusbooneysii Galaxy S3 mini illaa Android 4.4.3
Weli waxaan haystaa samsung-kii iigu horreeyay, galaxy s1 i9000 oo la cusbooneysiiyay 4.4.2 oo leh cm 11 iyo ugu dhakhsaha badan 4.4.3
Tallaabooyinkani ma ku habboon yihiin S3 caadiga ah?
Felix Knight dijo
Adigu, daabacaadda soo socota, maku samayn kartaa cashar Samsung Galaxy SII?. Laga soo bilaabo mar hore aad ayaad u mahadsan tahay !!!!!
Jawaab Felix Caballero
Waa salaaman tahay, waad ku mahadsan tahay casharradan mini-yada ah si loo cusbooneysiiyo S3 Mini, laakiin waxaan qabaa su'aal, sidoo kale ma waxay u shaqaysaa shirkadaha taleefannada gacanta ee Mexico? Waxaan sugayaa jawaabtaada… mahadsanid!
Jawaab ku sii Carlos Román Gómez
Waa inay u shaqeysaa dhammaan shirkadaha. Waxaan ugu isticmaalaa Argentina dhibaato la'aan.
Ku jawaab Fex
Andrew Ele dijo
Waxay u socotaa si aad u wanaagsan, laakiin dhibaato ayaa i haysata, Soo Celinta TWRP waa in la rakibaa ka hor ama ka dib, sababtoo ah ka dib markii Odin uu dhammeeyo waxqabadka oo dhan waxaan sameeyaa sida aad u sharaxayso laakiin qaabka Odin wuxuu mar kale ku soo muuqanayaa qolka, waxba iima muuqdaan tirtirka ?
Ujawaab Andres Ele
Muxuu dukaanka Play-gu iigu shaqeyn waayey?
Gali Soo-kabashada oo samee qaybta tirtir tirtirka oo tirtir qafiska dalvik ee Advanced
jir rosemary dijo
fiican sidee tahay sideen uga dhigaa mid yar mini s3 light inuu shaqeeyo
Ku jawaab marco romero
Galab wanaagsan Francisco, salaan ka timid vzla., Saaxiib, qolkan ma loogu talagalay s3 mini i8200? Mahadsanid
Jawaab Gabriel Rodriguez
JOSUE CESPESES dijo
ZELDAS WUXAY KU DHACDEEN, XAGEE KA SOO SAARI KARA FAYLIYADA WAQTIGEYGA WUXUU YAHAY VIRUS OO LAGA YAABAA IN AY KU SOO BAXDO QALABKII KITAABKA MA SII DHACDAY ??
Jawaab JOSUE CESPEDES
Dhibaatooyinka Arteaga dijo
Ma loo baahan yahay in taleefanka la xidido? Miyuu ku socon lahaa I8190L?
Miyuu jiraa qof horeyba u hubiyay inuu shaqeynayo 100%?
Ku soo jawaab Criss Arteaga
Haddii taleefanku xididaysan yahay.
Ma aqaano inay ku socoto i8190L.
Way shaqeysaa, waxaan dhibaato kale ku qabaa BT-ga markaan ku xirayo buugga xusuusta taleefankuna kama dallaco adabtarada gaariga. Inta soo hartay waa qumman yihiin.
Haddii suuqa uusan iyaga u shaqeyneynin, u tag si aad uhesho> codsiyada> dhammaantood oo u raadi suuqa, xulo oo u sii si aad u tirtirto xogta waana taas, way shaqeyn doontaa
Ku jawaab mickey
gapps-ka igama shaqeeyaan galax s3 mini: S
Jawaab Martin Alfonso Rubio Romo
Marka way shaqeysay mahadsanid !! Fex
Waad salaaman tahay, markaan isku dayo sidaad tidhi, waxay i siisaa guuldaro halkii aan ka gudbi lahaa mana garanayo sababta, maadaama sida aan soo sheegay, aan raaco talaabooyinka.
Maxaad u iibsaneysaa samsung haddii aad kaliya ka cabaneyso taabashada 'touchwiz', ka dib waxaad dhigaysaa rom oo waad sii cabanaysaa, taas waxaad u soo iibsanaysaa isku xirnaan, mootorola ama gpe, mana doonayo in la cusbooneysiiyo barnaamijyada oo dhan ma shaqeeyaan, miyaa Wax yar cusbooneysii qoraalkayga galax 2 7.0 ilaa 4.2.2 waana ka xun yahay 4.1.1, wuxuu ku dhacaa dilaa, wuxuu laalaadaa laba jeer intii hore, maalinta nacalad ee aan cusbooneysiiyo, iyo qoraalkayga 3 waxaan kusii wadaa 4.3 anigoo ka baqaya inaan ahaado kor loo qaaday, sidaan ugu dhacay s3 ilaa 4.3 ...
Rakibaadda rakib oo si fiican ayey iigu habboon tahay. Barnaamijyadi hooyo iyo wixii la xiriirayba waa la waayey. Waxay oraneysaa inaanan wax xiriir ah kuheynin kadambeeya flaahear keydi dhamaan xiriiradayaga sim. Fadlan caawi: S
Miyaanay xiriirada la wada shaqeyn karin gmail?
hello su'aal sababta oo ah batteriga samsung galaxy S3 MINI taleefanka gacanta wuu sii yaraanayaa oo cusbooneysiiyaa galaaska S3 MINI taleefanka gacanta TOROID 4.4.3 BATRIGA WUXUU sii dheeraanayaa .. MAHADSANID
Waxyaabaha xun ee ku saabsan kitkat-ka ayaa ah inaysan lahayn raadiyaha, haddii aad leedahay TV-ga casriga ah kuu oggolaan maayo inaad ku ciyaarto fiidiyow, sawirro iyo muusig aad ku haysato taleefankaaga gacanta iyo aaladda cimiladu aad uma fiicna, waxaan kugula talinayaa mid loo yaqaan fusionkat oo keena dhamaan shaqooyinkan isla markaana bilic ahaan u keenaya astaamaha s5 iyo marka laga soo tago waa mid aad u deggan maxaa yeelay waxay ku saleysan tahay kayd
Jawaab Pablo Pablo CR
Waxaan haystaa KK 4.4.4 oo wuxuu ku dhejiyaa fiidiyowyada TV-ga casriga ah iyada oo aan wax dhibaato ah. Abka YouTube-ka waxaa ku yaal astaan ​​ah in markii si toos ah loo taabto ay bilaabaneyso inuu fiidiyoowga ka ciyaaro TV-ga (illaa inta ay ka dhexjirto isla shabakadda LAN, dabcan)
Raadiye ahaan waa inaad kala soo degsataa barnaamij gooni ah, sida la sheegayo Spirit FM ayaa si fiican u shaqeeya, ma aanan tijaabin.
Waxaan isku dayay ROM kala duwan mar walbana waxaan aakhirka dib ugu soo laabanayaa Stock arinka raadiyaha dartiis. Waxaan rakibay illaa saddex nooc oo kala duwan oo ah Ruuxi FM UL (oo markaan ku sii socdo, aan bilaash ahayn), mana awoodo inaan ka qaato saldhig kasta oo Isbaanish ah (noocyada qaar xitaa ma lahan koox iswidish ah).
Sidaa darteed, waxaan jeclaan lahaa inaan ka gudbo Samsung, laakiin aniga idaacadu waa cunsur aasaasi ah maanta, mana jiro ROM aan ka ahayn Stock ii ogolaanaya inaan isticmaalo.
Waxaan raacayaa dhammaan tillaabooyinka warqadda illaa inta aan ka bilaabayo odinka, laakiin waxaan sugaa in yar oo waxay ku dhammaataa oraahda guul darreysata, ka dib markii aan dejiyo xiriirin iyo dhammaystirid (qorid) hawlgalkii.
FusionKat ayaa lagula taliyay 😉
Tani ma qaadaneyso saaxiib shabakad maxaa yeelay waxay noqon doontaa xog aan ula jeedo
Jawaab Jahaziel De Jesus Alcocer Espinosa
ku xir AP.
Ku jawaab martin alfonso rubio
Waxba ma fahmin, runta wax waliba way igu adagyihiin Esl: T laakiin runti ma aqaano, cusbooneysiinta qalabka runti lamahuraan ????
Waxaan rabaa inaan cusbooneysiiyo Samsung Mini GT- S5570L, suurtagal ma tahay?
Ku jawaab Canepa
Waad salaaman tihiin, xiriiriyaha zip-ka ee codsiyada asalka ah ee Google wuu jaban yahay, waxaan isku dayay nooca 4.3. laakiin taleefanka markii aan sameynayo nidaamka reboot hadda, waxaa iiga haray shaashadda guriga madow oo leh sumadda samsusg galaxy SIII mini.
Sababtaas ma noqon kartaa?
Asalka miyaa inaan dib u rakibaa?
Ku jawaab tonieri
Carlos Collazos sawir-haye dijo
WAAN KA BAXAY WAAN FASHILAN YAHAY DHAMMAADKA MAXAAN SAMEYAA
Ku jawaab Carlos Collazos
Kahor casharradan oo dhan waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda: dami taleefanka (s3 mini), riix AWOODDA + MENU (badhanka dhexe) + HALKAN (mugga hoos u dhig furaha) isla markaa, menu ayaa ka soo muuqan doona shaashadda, waa inaad riix furaha UP (mugga kor u kaca), marka aad tan sameyso waxaad sii wadaysaa inaad ku xirto PC-ga sida ay kor ku sheegayso casharka (halkaas haddii aad riixi karto batoonka BILAW ee barnaamijka ODIN taleefankuna waa inuu u muuqdaa inuu ku xiran yahay dekedda COM) iyo voila, looma baahna in xididaysan.
Jawaab ku davp2010
1aad Waa inaad ROOT ku sameysaa taleefoonka ka dibna wax walba oo kale? Waa halkaan halkaan waxba kama dhahayo marka hore Rooterlo samee kadibna raac casharka ………… ..
Jawaab SG S3 Mini
Caawinta !!!!!, isku xirka zip-ka ee codsiyada asalka ah ee Google, wuu jiitamayaa, waxaan isku dayay nooca 4.4.3 laakiin taleefanka markaan samaynayo nidaamka dib udajinta hadda, waxaa la iiga tagay shaashadda guriga madow ee samsusg galaxy SIII mini logo.
Ku jawaab mirna
Haddii aan sameeyo, kamaradu aniga ma ii shaqeyn doontaa?
Ku jawaab nilufer
Marka dib loo bilaabo nidaamka wuxuu kusii nagaanayaa SAMSUNG LOGO mana sii socon doono…. CAAWIMO PLS
Sidee loo soo celin karaa kaamirada?
Ma rujin karo s3 mini Gt-I8200L waxaan rabaa inaan cusbooneysiiyo 5.0.1 iskuday cyanogemod 12 pro waxaa jira kaliya qaabka I8190L ee ma ahan I8200L
Si aan u cusbooneysiiyo sanguuggeyga smini 3
Jawaab Ascencio Castillo
CAAWIMAW VIRUS AYAAN KUGU LEEYAHAY S3 MINI !! SIDEE AYAAN U SII FURAY?